Konke Mayelana Nezinkontileka Zesehlukaniso e-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Konke Mayelana Nezivumelwano Zesehlukaniso e-UAE
Amandla womndeni angathinteka njengoba iminyaka idlula. Ngenkathi yonke imishado iqala ukuba mihle futhi inezinhloso ezinhle kakhulu, kwesinye isikhathi izinto azihambi njengoba bekuhleliwe. Lapho lokhu kwenzeka, kufanele uthathe isinqumo esikhulu sokuya ngezindlela ezihlukile.
Iyini Inkontileka Yesehlukaniso?
I-Alimony nokusekelwa kwengane
Isivumelwano sokudivosa noma isivumelwano sokuxazulula isehlukaniso singumbhalo obhaliwe onamagama ahlukile kuye ngezwe noma indawo.
Kodwa-ke, noma ngabe iliphi igama elibizwa ngalo alunandaba. Inhloso yesivumelwano sesehlukaniso ukukhumbula noma yisiphi isivumelwano esifinyelelwe phakathi kwabalingani abahlukanisayo maqondana nokugcinwa kwengane nokuxhaswa, i-alimony, noma ukusekelwa komshado, nokuhlukaniswa kwempahla.
Isehlukaniso akuyona neze inqubo elula yokuhlangabezana nayo, imvamisa igcwele imizwelo, ukungezwani kanye nokulimazeka kwenhliziyo. Kepha ngamaphesenti angama-25 kuya kwangama-30 emishado ephela ngesehlukaniso unyaka nonyaka, kuphephile ukusho ukuthi lokhu akuyona into engjwayelekile njengoba kungenzeka ucabange, futhi awuwedwa.
Zivikele Ngezivumelwano Zomshado
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukusayinda noma iyiphi inkontileka yanoma yini, nokunye okuningi ngesehlukaniso. Lapho inkontileka isayiniwe, uboshwa yimibandela, noma ngabe impilo yakho ishintsha futhi kunzima. Ungalindeli ukuxabana kalula kunoma iyiphi inkontileka esayiniwe.
Okusemqoka ukuthi noma ucindezelwe, kufanele ungene ngomqondo ocacile nokuqonda okugcwele ukuthi umayelana nokusayina inkontileka futhi uzoboshwa yiyo yonke imigomo yayo. Kungenzeka ukuthi zombili izinhlangothi zifinyelele ekuvumelaneni ekutholeni ingxenye yalokho ezikufunayo.
Ngeke kube okungenangqondo ukulindela ukuthi uzokutholela konke okufunayo futhi elinye iqembu ngeke lithole noma yini kulokhu elikufunayo. Kunezindleko ezinkulu ngokusayina inkontileka futhi ukuba nommeli wesehlukaniso onamava e-UAE kubalulekile ukubheka izinto ngaphambi kokuzibophezela.
Khomba Uhlukanise Impahla Nezikweletu
Ngokukhomba kanye nokuhlukanisa impahla nezikweletu, into yokuqala okufanele uyithole amafomu asemthethweni akhona enkantolo yezwe, noma kuwebhusayithi yezobulungiswa. Njenganoma yisiphi isivumelwano sezomthetho, udinga ukusho amagama amaqembu aphelele ahilelekile esivumelwaneni, kulokhu wena nomlingani wakho.
Uzoba futhi nayo yonke imininingwane efanele ngomshado, okubandakanya usuku lomshado, usuku lwesahlukaniso, amagama, nobudala bezingane zomshado, isizathu sesehlukaniso, kanye namalungiselelo akho okuhlala namakheli nesimo esimanje kanye indawo yezingane zakho noma ezinye izimpahla ofisa ukuzisho.
khomba kahle yonke inhlobo yezimpahla nezikweletu
Okulandelayo wukuqinisekisa ukuthi imigomo yesivumelwano esikuyo idokhumenti yamukelwe yibo bobabili noshade naye. Lokhu kwamukelwa kwenza isivumelwano sisemthethweni. Okulandelayo ukukhomba kahle izimpahla nezikweletu. Abanye bazoba abahlanganayo kanti abanye bangabodwa noma bahlukane.
Ngokuvamile, izinto ezazingezomngane womshado ngaphambi komshado zihlala zingezabo, kuyilapho noma yini etholwa ngesikhathi somshado ngezimali zomshado iyimpahla yomshado noma ngabe leyo nto yayisetshenziswa umlingani oyedwa. Izimpahla zomshado nezikweletu kuphela ezingahlukaniswa.
Okulandelayo ukuxoxa nganoma yisiphi isivumelwano ozoba naso uma kufikwa ezinganeni zakho. Kuzofanele unqume ukuthi ngubani othola kuphela ukugcinwa, ukugcinwa ngokwahlukana, noma ukunakekelwa okwabelwanwa yikho okungcono kakhulu kuwe. Ukukhetha okungokwesiko kuvame ukugcinwa kuphela, kepha abaningi abahlukanisile bakhetha amalungiselelo okuthi izingane zishiyeke nabazali bobabili.
Okokugcina, kuzodingeka ulahle ukusekelwa kwengane nokusekelwa komngane womshado. Yize ilungelo lomntwana lokuthola uxhaso alinakususwa, kepha ilungelo lakho lokuthola usekelo lomuntu ongashada nalo lingahoxiswa.
Izinto ezi-5 zokuQinisekiswa zifakiwe Ekuhlukaniseni Kwakho Kwehlukaniso
1. Isheduli Eningiliziwe Yesikhathi Sokuzala
Izikhathi eziningi amaklayenti esivumelwaneni sokudivosa afuna uhlelo olucabangayo lwesikhathi sokuba ngumzali ngoba lokhu kuzosiza ukuvimbela izingxabano zesikhathi sokuba ngumzali. Isheduli yesikhathi sokuba ngumzali kubalulekile ukuyibuza endaweni yokuhlukanisa futhi lokhu kungafaka isheduli yeholide elinemininingwane ngakho-ke umbuzo wokulunga noma onomntwana eholidini elithile uhlala uphakama.
2. Imininingwane mayelana nokwesekwa
Ezimweni eziningi, i-alimony nokusekelwa kwengane kuyashintshwa amaqembu. Kubalulekile ukuthi lezi zinhlinzeko zichazwe kwinkontileka yesehlukaniso. Lokhu kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi ziyini izibopho zabo.
3. Umshuwalense wokuphila
Uma wena noma owakwakho nizoba nesibopho sokukhokha ukusekelwa kwengane noma ukuhlonishwa, qinisekani ukuthi lokhu kufaka isibonelelo kwinkontileka yakho yedivosi egunyaza umlingani okhokha umshwalense wokuphila uxhasa inani elanele lokuvikela isibopho sakhe.
4. Ama-akhawunti wokuthatha umhlalaphansi nokuthi ahlukaniswa kanjani
Qiniseka ukuthi ufaka uhlu lwazo zonke izinhlangano zefa ezithatha umhlalaphansi. Yenza kucace ngokuningiliziwe ukuthi izimpahla zizohlukaniswa kanjani nokuthi impahla ethile iya kubani.
5. Isu lokuthengiswa kwendlu
Esehlukanisweni, ikhaya lingathengiswa ngemuva kokuthi libe lokugcina, noma kungenzeka ukuthi iqembu elilodwa seliphumile. Noma ngabe icala linjani, ukuthengiswa kwendlu kufanele kuchazwe kabanzi ngakho yonke inqubo ihamba kahle.
Kungani Udinga Ummeli Wesehlukaniso Onolwazi E-UAE Ukulungiselela Isivumelwano Sesehlukaniso
Umthetho Womndeni e-UAE ungaphezu kokuthola nje isitifiketi somshado enkantolo. Kubandakanya nenqubo yesehlukaniso, ukugcinwa kwengane, nokuningi. Kungalesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuthi uqashe ummeli ofanele onolwazi kuzo zonke izici zemithetho yesehlukaniso nezinkontileka.
Uma kukhulunywa ngokulungiselela inkontileka yesehlukaniso, kunconywa kakhulu ukuqasha ummeli onolwazi ukulungisa lo mbhalo. Kodwa-ke, uma ummeli womlingani wakho esekulungisile, kusafanele uqashe ummeli ukuthi awubukeze futhi aqinisekise ukuthi konke ukunikezwa kwezomthetho kuyangezwa, kuyalungiswa, noma kuyasuswa ukuze kuvikelwe amalungelo akho.
Amanye amabinzana anjengokuthi "impahla yodwa," "ukugcinwa okusemthethweni," "ukulahla nokukhulula zonke izimangalo zesikhathi esizayo," nokuthi "khipha futhi ungabi nabungozi," kusho izinto ezibaluleke kakhulu. Ummeli kuphela ongaqonda ngokuphelele la magama kanye nokushintshwa kwawo esivumelwaneni esiphakanyisiwe. Bazokwenza isiqiniseko sokuthi akukho lutho oludonsayo ukuze ungagcina ulahlekelwe amalungelo abalulekile.
Ukuqashwa Komuntu Nge-UAE Isazi Sezomthetho Esiphezulu